Hay’adaha gargaarka oo Kenya ka codsaday in ay ka laaabato go’aanka ay ku joojisay Xawaaladaha – Radio Muqdisho
Hay’adaha gargaarka oo Kenya ka codsaday in ay ka laaabato go’aanka ay ku joojisay Xawaaladaha
Qaar kamid ah hay’adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa dowladda Kenya ugu baaqay in ay u ogolaato in shaqadooda dib u bilaabaan shirkadaha Xawaaladaha, waxayna walaac ka muujiyeen dhibaatada xanibaada ay u geysan karto halganka nolaleed ee qoysas badan oo Soomaali ah iyo shaqada hay’adaha gargaarka ee gudaha Soomaaliya.
” Qoysaska Soomaliyeed ayaa waayaya habka kali ah oo shafaafiyadda leh oo lacagaha ku dirsan jireen kuna heli jireen” ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen hay’adaha kala ah Oxfam, CARE, Mercy Corps, Adeso iyo World Vision Somalia.
” Hay’adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa khatar ugu jira in ay lumiyaan habka ay diri jireen lacagaha lagu qabto howlaha bani’aadminimo iyo tan horumarineed ee Soomaaliya” ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hay’adahan laguna daabacay Wakaaladda wararka ee Reuters.
Daraasad ay sanadkii 2013-ka ay sameeyeen Oxfam, Adeso and the Inter-American Dialogue ayaa lagu sheegay in sanadkasta Soomaalida ku nool dalka dibadiisa ay ay gudaha Soomaaliya u diraan $1.3 Bilyan taas oo ka badan lacagaha loogu bixiyo arimaha gargaarka iyo horumarinta Soomaaliya.
Lacagaha dibadda laga soo diro ayaa malaayiin dad ah oo gudaha Soomaaliya jooga ay nolashoodu ku dirsan tahay inkastoo uu dalku soo kabanaayo hana waxaa jira caqabado aad u badan.
Maalintii Arbacada ee la soo dhaafay ayaa dowladda Kenya waxaa ay shaqada ka joojisay 13 Xawaaladood oo ay leeyihiin ganacsato Soomaali ah,kuwaas oo lagu eedeyay in ay maalgeliyaan kooxda nabad diidka ah ee UGUS.
Arintan ayaa ka dambeysay dhibaatadii ka dhacday Jaamacadda Gaarisa oo lagu dilay 148 arday.
“Tani waxaa ay dhibaato culus ku tahay Soomaalida ku nool dalka Kenya, cadada lacageed oo loo soo diro dadka Soomaliyeed oo ku nool Kenya aad ayay u badan tahay” waxaa sidaasi yiri gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise Cali.
Kooxdaha samafalka ayaa sheegay in shirkadaha Xawaaladaha ay dowladda Kenya ka joojisay rukhsadaha shaqada ay ahaayeen kuwo si sharci ah u maamuli jiray hanaankooda maaliyadeed isla markaana mas’uuliyiinta Kenya ay ka codsanayaan in arinta ay ku saleyso mid shakhsiyadeed.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo goor dhow gaaray Garoowe